Nhazi na ibipụta foto | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Ịhazi na ibipụta foto
Kedu ka esi mee foto n'enweghị ndabere na Photoshop? na .png faịlụ? Ọ bụrụ na o kwere omume, kọwaa nzọụkwụ site na nzọụkwụ m ọhụrụ
Etu ị ga - esi mepụta eserese n’enweghị ntụpọ na Photoshop? .png faịlụ? Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, kọwaa nzọụkwụ site na nzọụkwụ m dị ọhụrụ na Nzọụkwụ - nke a bụ na ntuziaka na nkuzi. Na ebe a naanị ole na ole - ...
Kedu usoro iji chekwaa foto ahụ na nzụlite zoro ezo ?? Iji mee ka foto ahụ na-ese onyinyo ya?
Kedu usoro iji chekwaa foto ahụ na nzụlite zoro ezo ?? Iji mee ka foto ahụ na-ese onyinyo ya? Ha niile maara nke ọma, anaghị m echekwa na PNG ma ọ bụ GIF. ...
Kedu ka esi eme ihe ndabere maka oge ịse foto n'ụlọ?
Kedu ka esi eme ihe ndabere maka oge ịse foto n'ụlọ? na photoshop mfe ma ọ bụrụ na n'ụlọ! Na-achọ ihe na ihe ị gbakwunyere. Akwụkwọ dị iche iche zuru ezu, ọ bụghị nnukwu echiche. E nwere ákwà ...
Ndị na-ese foto, biko kọwaa n'ụzọ dị mfe na n'ụzọ dị mfe, otu esi emegharị faịlụ NEF ka JPEG?
Ndị na-ese foto, biko kọwaa n'ụzọ dị mfe na n'ụzọ dị mfe, otu esi emegharị faịlụ NEF ka JPEG? Ihe kachasị mfe site n'enyemaka nke onye na-ekiri ACDSEE dị na ya ma sụgharịa ya na FastStone Image Viewer. ọ ka ka ...
Etu esi emepe JPG na "Igwefoto RAW" na Adobe Photoshop CS4?
Etu esi emepe JPG na "Igwefoto RAW" na Adobe Photoshop CS4? Iji FS mepee, na menu Faịlụ, họrọ Mepee Ka… Na ala nke menu ndọtị, họrọ RAV, ma mepe Jeep. Ọ ga-emeghe ...
Kedu otu esi eme ka ebe di ọcha na Photoshop?
Etu ị ga - esi mee ezigbo ọcha na Photoshop? nkuzi vidiyo bu !! ! mana ọ dị nwute, agaghị m enye gị akwụkwọ nkọwa ... ị na-akparị mmụọ… EGO ị nweghị ike ịme ihe, ọ bụ ihe egwuregwu ma na-atọ ụtọ, ọ ...
Dịka na Photoshop, wepụ afo, n'akụkụ ma dozie ụkwụ.
Kedu otu esi eji Photoshop wepu afọ, n'akụkụ ma mezie ụkwụ. Anaghị m ekwenye na Liqyify (plastik). Nyo a na-agbagọ "ihe" ahụ anaghị edepụta nsonaazụ achọrọ - nnabata nke itinye aka ...) M na-eme ya n'ụzọ dị iche. M gosipụta…
Kedu esi etinye ederede na Photoshop ???
Etu esi etinye ederede na Photoshop ??? ibudata textures na ntanetị - gt; mepee ha na Photoshop - gt; mezie nha ya na eserese - gt; sere na dobe na foto - gt; na okpu ederede ị na-agbanwe nghọta site na 10 ...
Kedu ka m ga-esi kpuchie ihu na foto ahụ, na ihu mma, emoticon ..?
kedu ka ị ga - esi kpuchie ihu gị, ihu, emoticon ..? Ọ bụrụ na ọbụghị ndị enyi Photoshop, mgbe ahụ ihe kachasị mfe bụ PIXELIZATION. dịka ọmụmaatụ, IrfanView bersh (kpamkpam enwere - irfanview.com - asụsụ abụọ na plugins ...
Kedu otu onye na-eme ihe ngosi iji tinye akwa akwa n'ime ndabere?
Etu esi etinye akwa n’okpuru na Photoshop? Naanị na menu menu n'ígwé na-eme ndokwa nke n'usoro n'usoro ịchọrọ. ke window - n'ígwé, dị nnọọ dọrọ oyi akwa na ihu ka isi ala ...
kedu usoro mmemme nke ị nwere ike ikpokọta ọtụtụ foto n'ime otu dịka ebe a?
kedu usoro mmemme nke ị nwere ike ikpokọta ọtụtụ foto n'ime otu dịka ebe a? Ọhụụ ndị dị otú ahụ na-adịghị mma nwere ike ime ọtụtụ ihe. Dị ka ihe atụ Picasa kwadoro. Ngwakọta mmemme dị na ya, ebudatara n'efu maka nkeji. Ọ bụrụ na ...
Faịlụ "NEF"! Kinddị usoro a bụ dibyl ?? Etu esi ewepu ya ?? enweghi Photoshop Site na mmemme iji chigharia?
Faịlụ "NEF"! Kinddị usoro a bụ dibyl ?? Etu esi ewepu ya ?? enweghi Photoshop Site na mmemme iji chigharia? Codex NEF bụ modul na-enye gị ohere iji faịlụ fọntọ rụọ ọrụ na usoro Nikon RAW…
kọọrọ pliz ọtụtụ foto dị na pixels 10X15 na 15X18
kọọrọ pliz ọnụ ọgụgụ nke foto dị na pixels 10X15 na 15X18 Ndị a na-emechi ọnụ ọgụgụ ndị isi ego anaghị aghọta ihe centimeters. Ya mere, ihe ga-ebipụta n'enweghị ihe nkedo kwesịrị inye ma sentimita, ma ọ bụ ...
Kedu esi eme foto na nwa na agba?
Etu esi eme foto na oji? enwere mmemme pịlị na google, ọ bụ na enweghị nsogbu ọ bụla ... n'ezie, na mmemme ọ bụla, na ekwentị ọ bụla nwere igwefoto, na Photoshop, na ngwa ahụ, na ...
Kedu ihe omume ịntanetị maka iwepu ihe nchapu site na foto ochie?
Kedu ihe omume ịntanetị maka iwepu ihe nchapu site na foto ochie? Nyochaa ọtụtụ ihe omume a na-ewu ewu, ha niile anaghị arụ ọrụ, kama iwepu ihe ọkpụkpụ na ihu ma ọ bụ ihe mgbagwoju anya ...
Ole ole pikselụ dị na ntanetị 9 na 12 Na ngwa ngwa Achọrọ m foto na 9 usoro na 12
Kedu pikselụ ole na usoro foto foto nke 9 na 12 ngwa ngwa achoro m foto na usoro 9 na pikselụ 12 72 maka onyonyo dị elu na ụdị foto a ... Eleghị anya ole ...
Geogradia anaghị arụ ọrụ na instagram, GPS na wi-fi na agbanyere, mana mgbe m nwara, ọ sịrị "enweghị ike ịbanye ebe ahụ"
Igwe na-arụ ọrụ anaghị arụ na instagram, GPS na wi-fi na-agbanwu, mana mgbe m nwara, ọ na-ekwu “enweghị ike ịbanye ebe ahụ” GPS (English Global Positioning System bụ sistemụ ụwa zuru ụwa ọnụ, nke G.P. Es) na-agụ ...
Uzo esi emeghari foto site na akwukwo RAW na JPEG
esi sụgharịa foto site na RAW usoro ka JPEG Ị nwere ike ịnyefe foto site na RAW na JPEG n'ụzọ dị mfe site na usoro ihe omume nke ụlọ foto. N'otu oge ahụ, ọ ga-adị ntakịrị nkwụsị. Nke a bụ njikọ nke usoro ihe omume: ...
Esi ebipụta dollar na ulo
Otu esi ebipụta dollar na ụlọ ma ị na-ele anya, ole nchebe enwere na mgbakwunye mbipụta, na mkpokọta, ego na-ebipụta "mbipụta dị elu" na ngwa nbipụta, ị nwere ike iju naanị nwanne nwoke nke obere) ọ ka mma ọ bụghị ...
ebe ebudatara iche iche Camera Raw maka cs5 Russian, wuru na-emeghe.
ebe ị ga - ebudata igwefoto Raw dị iche iche maka cs5 na Russian, ihe a na-ewu anaghị emepe emepe. Photoshop Dezie-nhọrọ-FileHandling- (CameraRawPreferences) - Na-esote, lelee igbe dị n'akụkụ “Họrọ Nhọrọ igwefoto Adobe maka nkwado igwefoto RAW Kwadoro” - Dezie- Ntọala (ihe ndị na-amasị) -Nchịkwa…
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,489.